कठै न्याय हराएको मेरो देश - Dhangadhi Khabar
आइतबार १९, मङि्सर २०७८ ०७:०३
कठै न्याय हराएको मेरो देश
सभा , समारोह , वैठक अनि भाषणका क्रममा त न्याय बारे हामी थुप्रै प्रबचन सुनेका छौ ।
जब वास्तविकता थाहा पाउछौ तब आखा बाट आसु खस्नु अनि चुप लागेर बस्नु बाहेक अरु केहि गर्न सकिन्न ।न्यायका लागि जति नै अदालत को ढोका ढकढक्याए पनि पीडितले निस्पछय रूपमा न्याय पाउन सकेन ।
घटना सङ सम्बन्धि सत्य तत्थ्य प्रमाण भित्र भैत्रै लुकाइ दोशी लाई सजाय दिनुको सट्टा उसलाई बचाइ थप अपराधीक कार्य गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ भने पीडितलाई न्याय दिइ मनोबल बढाउनुको सट्टा उल्टई मनोबल घटाउने काम गरिन्छ । दुई तहको सरकार बाट पारित भएको देशको मुल कानुन संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धि हक को बारे उल्लेख गरेको छ । तर जब आन्याय पर्छ तब खोइ न्याय पाएको ? महिला अभिनेता , महिला जागरण , महिला सशक्तीकरण भनी थुप्रै आवज उठे तर बिडम्बना आज त्यही महिला अन्धकार भबिस्यालाइ उजवल बनाउन भन्दै बिधालय जन पनि डर छ।
झोलामा कापि किताब कलम सङ्गै हतियार राखेर हिंड्नु पर्ने अवस्था छ ।बिधालय गयकि छोरी सझ घर फर्किन्छी कि फर्किन भनी बस्नु परेको छ आखिर किन ? बालबालिका को हक , महिला को हक , समान्पुर्ब्क बाच्न पाउने हक , स्वत्रनता को हक , सामाजिक सुरक्षा कोहक ,सामाजिक न्याय को हक भनी हामी पढेलेखेका अनि सुनेका छौं ।तर खोइ त्यस् को उपयोग गर्न पायका छौँ ? यदि पायका थियौ भने किन पिन्जठा को चरी जसरी जिउनु परेको छ । देशका जुनसुकै कुनामा रहेका महिला आजआफ्नै परिवार को सदस्य बाट असुरक्षित झन ।
थाहा छैन कति वेला कुन महिला कति बेला बल्तकृत भयोरु कुन बेला हत्या भयो ? कुन बेला एसिड आक्रमण भयो भनी दुखत समाचार सुनमा आउने हो । धन र डन ले भरिएको मेरो देश मा निमुखा जनता को अन्याय को अवाज कसले सुन्छरु काग कराउँदै गछ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै भयो मेरो देशमा याहा न्याय का लागि जतिनै आवाज उठेनि जतप नै आन्दोलन गरे पनि नेतालाई सधै कुचि मात्र प्यारो भयो ।
न्याय का लागि जती नै जनता कराए पनि दोषीलाई कहिले पनि सजाय दियनकी रु दोषी पत्ता लगाउन सकिएन ? वगथि मा निर्मला पन्त को बल्तकार पछि को हत्या त्सैगरी भागरवती को हत्या , खोई आज त्यो घटना घटेको दुई तीन वषँ भयो तर उनीहरू को आत्माले शान्ति पायको छ रुभनिन्छ सियो चोर ले भोली सुन चोरन सक्छ ।हिजो निमंला सगँ भयको घटना भोली हामी सगँ पनि नहोला भन सकिन ।
जब सम्म पैसा को खोल वडने नेता , भष्टाचारी अनि अप्रराधि हामो् समाज बाट हटदैन तब सम्म देशका सोझा निमुखा जनताले न्याय पाउन सक्दैन ।यो कहिले सम्म चल्छ सरकार ??
बिहिबार २७, जेठ २०७८ ०८:४१ मा प्रकाशित